Iingxaki zokufunda kwilizwe elibukelwayo. | Uncwadi lwangoku
Iingxaki zokufunda kwilizwe elibukelwayo.
Kule minyaka imbalwa idlulileyo abantu abaninzi bandixelele ukuba le okanye leya ncwadi ibiyiyo ku khathaza kuba akhonto ibisenzeka kumaphepha okuqala angamashumi amabini. Kwaye, ke, bayekile ukuyifunda. Into endenza buhlungu ngamaxesha anje kukuba, ngenxa yokuswela umonde, aba bantu baphose amabali amnandi. Ndicinga ngayo, ndiyifumene namhlanje sonakele. Iingxaki zokufunda kwifayile ye- Ihlabathi elinamvi kukuba sinayo zininzi izinto ezikhuthazayo zangaphandle, evelisa iimvakalelo kwangoko, kwaye sifuna ukuziva ngoku, ngoku, kwangoko. Sijonge amabali afikelela kwinqanaba, ngokungacacanga.
Andizukuhanahanisa kangako xa nditsho ukuba igama elibhaliweyo lihlala liphezulu, kuba ndikonwabela uthotho lweemovie kunye neemovie. Nangona kunjalo, ezi ntlobo zobugcisa zenze ukuba abantu abaninzi balibale indlela yokonwabela amabali athabatha ixesha lawo, ezikhula ngononophelo nothando. Kwimeko yabo bancinci kunam, kusenokwenzeka nokuba bangazi enye into.
Xa bekukho ingxolo encinci
Ndatya impucuko, yandigulisa kwaye yandigulisa.
UAldous Huxley, "Ihlabathi Elitsha Elinobugorha."
Ndazalwa ekuqaleni kweminyaka yoo-2018, kwihlabathi elaline-analog, ubuncinci kwinqanaba lasekhaya. Andinayo i-intanethi, andinayo ifowuni ephathekayo, ngoko xa ndilala embhedeni kunye nencwadi kwaye akukho mntu unokundiphazamisa. Namhlanje, phakathi ku-XNUMX, umntu akakwazi ukuvula inoveli ngaphandle kokufumana imiyalezo emine evela WhatsApp kunye nezaziso ezithandathu ze Twitter. Nangona ndibhala eli nqaku, andinakukhetha ngaphandle kokujonga iselfowuni kaninzi.
Andifuni ukwenza iidemon itekhnoloji, kude nayo. I-Intanethi isivumela ukuba sinxibelelane nabantu kumawakawaka eekhilomitha, kwaye sibhaqe iindlela zobugcisa ebesingazazi ngenye indlela. Kodwa ikwayi- Umthombo weziphazamiso ezithintela ukuba singangeni ekungeneni nasekuthuleni okufunwa yinoveli ende. Yinto leyo abo bayaziyo kwisizukulwana sam, abazalelwa kwixesha lokumiselwa kwangaphambili, ngakumbi nangakumbi kwizizukulwana zangaphambili.
Andazi ukuba wena, undifundayo, uneminyaka elishumi elinesibini okanye amashumi asixhenxe. Kodwa kumacala omabini ndicebisa oku kulandelayo: kwixa elizayo xa ubeka incwadi kuba kwiphepha lokuqala khange kubekho dubulo, okanye i-epic duel ekufeni, qhubeka ufunda. Khumbula ukuba uninzi lwamabali amnandi athatha ixesha ukuze uqhelane nabalinganiswa kunye nemithetho yehlabathi labo. Kwaye leyo yinto efanelekileyo yokuzihlaziya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iingxaki zokufunda kwilizwe elibukelwayo.
Inqaku elihle. Ndicinga ukuba sinokubaninzi ngokufanayo kunokuba sihlangana neliso. Ndiyavuma ngokupheleleyo ukuba namhlanje yonke into ikhawuleza kakhulu, kukho ukugcwala kweemvakalelo ezenza ukuba kube nzima kuthi ukonwabela oko kuthatha ixesha. Ngokunyaniseka, ndicinga ukuba kulihlazo, kuba onke amabali amnandi endiwafundileyo (okanye awabonileyo, masingalibali ukuba kukwakho neemovie ezihamba kancinci okanye uthotho) zihamba lula. Ndiyibona njengenyaniso yokwenene. Ngamanye amaxesha, ukukhawuleza kunye nokukhawuleza akuthethi ukuba ngcono, kuba ugqiba ukungabi nanceba ngebali, kunye nabalinganiswa okanye isenzo ngokwaso, ubuncinci kwinqanaba lokubaliswa.
UMNumzana Escabias sitsho
Enkosi ngokuma ubeke izimvo apha, Nishi, ndiyavumelana nayo yonke into oyithethileyo.
Phendula MRR Escabias
Ndikhumbula ndisengumntwana xa ndandilala ngentsimbi yesixhenxe emva kwemini, ndifunda incwadi ngokukhanyisa kwesibane esincinci kwitafile esecaleni kwebhedi. Ndiyazikhumbula ezo ntsuku, kubonakala kum ukuba zazizizityebi kakhulu kwinqanaba loqeqesho lwengqondo. Ngoku yonke into ibonakala kum yenziwe. Nokuba ukubhala la magqabantshintshi kwakunzima, andisenawo la magama afanelekileyo endinawo xa ndifunda ngakumbi.
Ndiyakuqonda ngokugqibeleleyo, Jorge.
Epreli, inyanga yeencwadi. Zintoni, zithetha ntoni. Iingcinga ezingama-30